Ubuntu For Beginner – NaingLinHan
July 7, 2016 October 28, 2016 /nainglinhan
Ubuntu တင်မယ့် ကွန်ပျူတာမှာ 700MHz နှင့်အထက် CPU၊၊ RAM 512MB နဲ့ Storage 5GB ရှိရပါမယ်။ Software တွေ install ဖို့ System Update လုပ်ဖို့ အတွက် အင်တာနက်လိုပါမယ်။ Ubuntu မှာ 32bit(i386) နဲ့ 64bit(amd64) ဆိုပြီး ၂မျိူးရှိပါတယ်။ 32bit က Ram 4GB အထိသာ လက်ခံတဲ့အတွက် တင်မယ့် ကွန်ပျူတာက RAM 4GB နှင့် အထက်ဆို 64bit ကို ရွှေးချယ် သင့်ပါတယ်။ Ubuntu 16.04LTS ကို ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ အခွေဆိုင်တွေမှာလဲ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ အခွေရှိပြီးသူများ အဆင့်–၁ ကို ကျော်သွားပါ။
၁. Ubuntu install လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
Ubuntu ကို install လုပ်ဖို့ DVD အလွတ်တစ်ချပ် သို့ USB Stick တစ်ခုလိုပါမယ်။
၁.၁ Bootabel DVD
Ubuntu ကို DVD နဲ့တင်ဖို့ အတွက် bootable DVD ဖြစ်အောင် Burn ရပါမယ်။ အခွေအလွတ် ကို စက်ထဲထည့်ပါ။ Download ရယူထားတဲ့ iso ဖိုင်ကို Right Click ပြီး Burn Disc Image ကို ရွေးပေးပါ။ အခွေ Burn သွားပါမယ်။
၁.၂ Bootable USB
Ubuntu ကို USB ကနေ တင်ဖို့ အတွက် Universal USB Installer ဆိုတဲ့ Software ကို ဒီမှာ ရယူပါ။ USB stick ကို စက်မှာတက်ပြီး Universal USB Installer ကို ဖွင့်ပါ။ drop down menu မှာ Ubuntu ကို ရွေးပြီး အောက်က အကွက်မှာ download ဆွဲထားတဲ့ iso ဖိုင်ကို ရွေးပေးပါ။ အောက်ဆုံးက Drop Down Menu မှာ USB ကိုရွေးရပြီး stick ကို format ချမယ်ဆို format usb stick မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
၂. Installing Ubuntu
DVD သို့ stick ကို စက်မှာတက်ပါ။ ပြီးရင် Boot Menu ကို ၀င်ရပါမယ်။ Boot Menu ကို ဝင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပျူတာ စတက်တက်ချင်းမှာ F12 ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ တစ်ချိူ့ စက်တွေမှာ F2 နှိပ်ရပါတယ်။ Boot Menu ဝင်တဲ့ key က စက်တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မတူပါဘူး။ မိမိစက်ရဲ့ အမျိူးအစား မော်ဒယ် ပေါ်မူတည်ပြီး Google မှာ How to enter boot menu ဆိုပြီး ရှာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့ စက်မှာတော့ F12 ပါ။
Boot Menu မှာ CD အတွက် C ကို ရွေးပေးပါ။ ကျွန်တော်က CD နဲ့ Live တက်ထားလို့ပါ USB နှင့် Live တက်သူများ USB ကို ရွေးပေးရပါမယ်။
ဒီလိုလေး Ubuntu Logo လေးတက်လာရင်ရပါပြီ။ တက်မလာရင် DVD (သို့) အခွေမှာ error ရှိနေလို့ပါ။
Try Ubuntu နဲ့ Install Ubuntu ဆိုပြီး ၂ မျိုးတွေ့ပါမယ်။ Try Ubuntu က Ubuntu ကို install မလုပ်ပဲ အစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ပါ။ Install မလုပ်ပဲ အခွေပေါ်မှာ သုံးတာမို့ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်မရပါဘူး။ အခု install လုပ်မှာမို့ install ကိုနှိပ်ပါ။
အပေါ်က မှိန်နေတဲ့ စာကြောင်းက install လုပ်နေတုန်း update လုပ်မလားလို့မေးတာပါ။ ကျွန်တော်စက်မှာ internet connection မရှိတဲ့ အတွက် မှိန်နေတာပါ။ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားပါ နောက်မှ Update လုပ်လို့ရပါတယ်။ install လုပ်နေစဉ် Update လုပ်နေတဲ့ အတွက် အချိန်ကြာသွား နိုင်ပါတယ်။ အောက်တစ်ကြောင်းကတော့ အခြားပြင်ပ Software တွေပါ တစ်ခါထဲ install မလားလို့မေးတာပါ။ Install ချင်ရင် အမှန်ခြစ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးကြောင်းက Hardisk တစ်ခုလုံး ဖျက်ပြီး Ubuntu သီးသန့်တင်မလားလို့မေးတာပါ။ Hardisk ထဲမှာရှိတဲ့ OS တွေ Data တွေအကုန် ပျက်သွားပါမယ်။ စက်ထဲမှာ Windows တင်ထားတာရှိရင် Install Ubuntu Alongside With Windows ဆိုပြီးတစ် ကြောင်းအပိုပါပါ လိမ့်မယ်။ Windows နဲ့ Dual Boot တင်ချင်ရင်တော့ Alongside ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ Windows နဲ့ Ubuntu Dual boot တင်မယ်ဆို Windows ကို အရင်တင်သင့်ပါတယ်။ Windows ကို နောက်မှတင်ရင် Windows က Ubuntuကို မသိတဲ့အတွက် Ubuntu ကို ၀င်လို့မရပါဘူး။နောက်ပြန်ပြင်လို့တော့ရပါတယ် နဲနဲတော့ အလုပ်ပိုတာပေါ့။ Partition ကို Manual ပိုင်းလိုရင်တော့ Something else ကိုရွေးပေးပါ။
မြေပုံပေါ်က မြန်မာနိုင်ငံပုံလေးကို ရွေးပေးပါ။
Keyboard Layout ကို Eng Us ပဲထားပါ။
နာမည် User name နဲ့ Password ဖြည့်ပါ။ User name ကို စာလုံးအသေးနဲ့ ရေးရပါမယ်။ Password မတောင်းပဲ တန်းဝင် စေချင်ရင် Login automatically ကို ရွေးထားနိုင်ပါတယ်။
အခုဆို install စလုပ်နေပါပြီ။
Install ပြီးရင် ဒီလိုပေါ်လာမှာပါ။ Ubuntu က Driver တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သီးသန့် ထက်ပြီး install ဖို့မလိုပါဘူး။
Categories: UbuntuTags: How To Android, Installation, Tips And Tricks, Ubuntu, Usb Live